သူချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အသက်ဝင်လွန်းလှတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် – Nyi Ma Lay
သူချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အသက်ဝင်လွန်းလှတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ ပိုင်တံခွန် က တော့ အာရှ တစ်ခွင်မှာ သာမက အနောက် နိုင်ငံတွေ ထိပါ အောင်မြင် ကျော်ကြား နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မင်းသား တစ်လက်ပါ ။ လက်ချိုး ရေလို့ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာရှင် တွေထဲက တစ်ယောက် လို့တောင် တင်စား ရမှာပါ ။ မကြာသေးမီ ကလည်း စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် မှုက ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့တာပါ ။ လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီး နောက်မှာ တော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာ လှူပ်ရှားမှု တွေပြန်လည် စတင်ကာ ပရိသတ်နဲ့ ပြန်လည် ထိတွေ့ ခဲ့တာပါ ။
ဒီနေ့မှာ တော့ ” အသံတွေ ကြားရတယ် . . .ပုံရိပ် တွေလဲ မြင်ရတယ်. . .အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲဖွင့် ကြည့်လည်း မင်း က တော့ ထွက် မလာဘူး ။ငါ့မှာ တော့ သေဆုံးခြင်း ကိုခဏ ခဏ . . .ရေစက်ချ ပေးပေမယ့် အစွဲလန်း ကြီးလွန်းတဲ့ မင်းကဘယ်တော့ မှ သာဓုမခေါ်ခဲ့ဘူး ။ ဒါနဲ့များ မင်းရှိ နေသေး တာဘာ လို့ ငါ့ကို ခဏခဏ . . .သတိပေးနေရတာလဲ . . . မကျွတ်လွတ်တဲ့ အလွမ်းငယ် ( Psycho ) ( ၁၆. ၉ . ၂၀၂၁ )# ပိုင်တံခွန် ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ မှာ တင်လာ ခဲ့တာပါ ။
အနု ပညာအလုပ် တွေအပြင် အမြဲလိုလိုကဗျာတွေရေးတတ်ပြီး ပန်းချီတွေ​ဆွဲ​လေ့ရှိတဲ့ ပြည်သူချစ်ပိုင်တံခွန်ကတော့ပြန်လည်အသက်ဝင်ကာ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပြန် လည် ဝင် ရောက်ခဲ့ပြီလို့​​​ဆိုရမှာပါ။ပိုင်တံခွန်ရဲ့အသက်ဝင်လွန်းလှတဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ပရိသတ် တွေ က တော့ ဝမ်းနည်းခဲ့ကြတာပါ။ ပရိသတ် တွေလည်း ခံစားရတဲ့ ခံစားချက် လေးကို ဝေမျှခဲ့ ပါဦးနော် ။
Credit : Cele ChitThu
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပိုင္တံခြန္ က ေတာ့ အာရွ တစ္ခြင္မွာ သာမက အေနာက္ နိုင္ငံေတြ ထိပါ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား ေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မင္းသား တစ္လက္ပါ ။ လက္ခ်ိဳး ေရလို႔ရတဲ့ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြထဲက တစ္ေယာက္ လို႔ေတာင္ တင္စား ရမွာပါ ။ မၾကာေသးမီ ကလည္း စစ္ေကာင္စီ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈက ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့တာပါ ။ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာ ေတာ့ သူ႔ရဲ့ အႏုပညာ လႉပ္ရွားမႈ ေတြျပန္လည္ စတင္ကာ ပရိသတ္နဲ႔ ျပန္လည္ ထိေတြ႕ ခဲ့တာပါ ။
ဒီေန႔မွာ ေတာ့ ” အသံေတြ ၾကားရတယ္ . . .ပုံရိပ္ ေတြလဲ ျမင္ရတယ္. . .အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆြဲဖြင့္ ၾကည့္လည္း မင္း က ေတာ့ ထြက္ မလာဘူး ။ငါ့မွာ ေတာ့ ေသဆုံးျခင္း ကိုခဏ ခဏ . . .ေရစက္ခ် ေပးေပမယ့္ အစြဲလန္း ႀကီးလြန္းတဲ့ မင္းကဘယ္ေတာ့ မွ သာဓုမေခၚခဲ့ဘူး ။ ဒါနဲ႔မ်ား မင္းရွိ ေနေသး တာဘာ လို႔ ငါ့ကို ခဏခဏ . . .သတိေပးေနရတာလဲ . . . မကၽြတ္လြတ္တဲ့ အလြမ္းငယ္ ( Psycho ) ( ၁၆. ၉ . ၂၀၂၁ )# ပိုင္တံခြန္ ” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလး ကို သူ႔ရဲ့ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ တင္လာ ခဲ့တာပါ ။
အႏု ပညာအလုပ္ ေတြအျပင္ အျမဲလိုလိုကဗ်ာေတြေရးတတ္ၿပီး ပန္းခ်ီေတြ​ဆြဲ​ေလ့ရွိတဲ့ ျပည္သူခ်စ္ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ျပန္လည္အသက္ဝင္ကာ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ထဲ ျပန္ လည္ ဝင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီလို႔​​​ဆိုရမွာပါ။ပိုင္တံခြန္ရဲ့အသက္ဝင္လြန္းလွတဲ့ကဗ်ာေလးကိုဖတ္ၿပီး ပရိသတ္ ေတြ က ေတာ့ ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကတာပါ။ ပရိသတ္ ေတြလည္း ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ ေလးကို ေဝမၽွခဲ့ ပါဦးေနာ္ ။
Previous post ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာတောင် ဝက်သားတုတ်ထိုးရောင်းပြီး ရပ်တည်မှု ပြောင်းလဲ နေကြတဲ့အချိန်မှာ အနုပညာသမားတွေ သမာအာဇီဝနဲ့ Live sale ရောင်းတာအပြစ်ရှိလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချောရတနာ
Next post ဝတ်ထားတဲ့ စကပ်ပြဲနေမှန်းတောင် မသိပဲ ပို့စ်အမျိုးမျိုးပေးကာ ပဲတွေများနေပြီး အလှပုံတွေ ရိုက်ခဲ့မိတဲ့ Alice Ong